Ithanga lembewu yeoyile yioyile entsha yekhokhonathi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ithanga leoyile yembewu kubonakala ngathi liphelile ioyile yekhokhonathi kwindawo emnandi yomzuzu. Ngaphandle kokudibana, kufanelekile ukuba ubekho kwi-radar yakho, kokubini ngenxa yokunambitheka kwayo kunye nezibonelelo zayo zesondlo.
Yenziwe ngembewu yohlobo oluthile lwethanga e-Austria, ioyile yembewu yethanga iluhlaza okombala ngombala kunye nencasa ye nutty eyosiweyo.
1 Izibonelelo zeoyile yembewu yethanga
2 Uyisebenzisa kanjani ioyile yembewu yethanga
Izibonelelo zeoyile yembewu yethanga
Ioyile yembewu yethanga isetyenziselwe iinjongo zonyango zesintu kangangamakhulu eminyaka.
Ukuqala ngeziseko, imbewu yeethanga iqulethe ii-antioxidants ezinjenge-carotenoids kunye nevithamin E.
Kukholelwa ukuba ziya kunceda ukunciphisa ukudumba kunye nokulwa ukonakala kweseli kwii-radicals zasimahla.
Kwaye ioyile ngokwayo ibonakala inezibonelelo ezifanelekileyo zempilo.
Kuphononongo luka-2015 olutshintshe ioyile yembewu yethanga endaweni yeoli egcweleyo, kwabakho ukuphucuka kwesifo sesibindi esinamafutha esingatyisi kunye nophuhliso lwe-atherosclerosis.
Indima yayo njengonyango lokulahleka kweenwele emadodeni yavavanywa- isifundo esincinci sika-2014 safumanisa ukuba i-capsule yeoyile yayihambelana nokukhula kweenwele xa kuthelekiswa ne-placebo.
Ioyile enjengembewu yethanga ityebile kwi-monounsaturated kunye ne-polyunsaturated fatty acids, enokuba luncedo kukudumba, impilo yentliziyo, kunye nokugcina ubunzima obunempilo.
Uyisebenzisa kanjani ioyile yembewu yethanga
Ngenxa yamanqanaba aphezulu e-polyunsaturated fat, i-oyile inendawo yokutshaya eyi-320 degrees, nto leyo ethetha ukuba mayingasetyenziswa ekuphekeni njengoko oku kungonakalisa kwaye kugalele ioyile.
Nangona kunjalo, kuyacetyiswa njengokunxiba isaladi okanye ukugqiba izitya ezinje ngeesuphu, ihomus, kunye nemifuno eyosiweyo.
Ke ngoko, ukuthintela amafutha kwi-oxidizing, kungcono ukugcina ioyile kwifriji, ngakumbi emva kokuvula.